Gonorrhoea - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
ဂနိုရောဂါ ဆိုတာဘာလဲ ?
ဂနိုရောဂါ ဆိုတဲ့ ဆီးပူညောငျးကရြောဂါလို့လဲ ချေါကွပွီး အဓိက လိငျဆကျဆံရာမှ ကူးစကျတဲ့ ရောဂါတဈခုပဲ ဖွဈပါတယျ ။ဂိုနိုကောကပျ ( Gonococcus ) ဘကျတီးရီးယားကူးစကျမှုကွောငျ့ ဖွဈပှားလရှေိ့ပါတယျ ။
အကာအကှယျမဲ့ လိငျဆကျဆံခွငျး ( ကှနျဒုံမသုံးခွငျး )မှ တဆငျ့ ကူးစကျနိုငျပါတယျ ။ ပါးစပျနဲ့ စအို လမျးတှကေလဲ ကူးစကျနိုငျပါတယျ ။ မိခငျမှ ကလေးသို့လဲ ကူးစကျနိုငျပါတယျ ။
အကာအကှယျမဲ့လိငျဆကျဆံခွငျးဟာ လိငျမှတဆငျ့ကူးစကျတတျသော ရောဂါအကုနျလုံးကို ဖိတျချေါသကဲ့သို့ဖွဈစတေဲ့အတှကျ လိငျဆကျဆံရာမှာ ကှနျဒုံးသုံးခွငျးဟာ အကောငျးဆုံးသော အကာအကှယျပဲ ဖွဈပါတယျ ။
ဘယျလို လက်ခဏာတှပွေမလဲ ?
ဂနိုရောဂါဟာ ကူးစကျပွီး ဆယျရကျကွာလြှငျ ရောဂါလက်ခဏာမြားပွလရှေိ့သျောလညျး တခြို့သူမြားတှငျ လပေါငျး အတျောကွာမှ ပွသလရှေိ့ပါတယျ ။
၁၀ ရာခိုငျနှုနျးသော အမြိုးသားမြားနှငျ့ ၅၀ရာခိုငျနှုနျးသော အမြိုးသမီးတှမှောတော့ ဒီရောဂါလက်ခဏာတှကေို မခံစားရပါဘူး ။
* မိနျးမကိုယျကနေ အဖွူမြားဆငျးခွငျး စိမျးရှရှေေ ခပျဝါဝါ ပဈြခြှဲခြှဲ အရညျမြား ဆငျးခွငျး
* ဆီးသှားစဉျနာကငျြခွငျး ဆီးအောငျ့ခွငျး
* ဝမျးဗိုကျအောကျပိုငျးတဈဝိုကျတှငျ နာကငျြခွငျး
* ရာသီလာစဉျ သို့မဟုတျ ရာသီတဈခုနှငျ့တဈခုအကွား သှေးအလှနျအမငျး ဆငျးခွငျး သှေးဆငျးမြားခွငျး
* အမြိုးသား အင်ျဂါမှ အခြှဲဆငျးခွငျး
* ဆီးကငျြခွငျး ၊ ဆီးအောငျ့ခွငျး ၊ ဆီးကနျြ ဆီးမဝဟုခံစားရခွငျး
* ဆီးခဏခဏ သှားခွငျး
* လိငျတံထိပျ အရပွေားတှငျ နာကငျြ ရောငျယမျးနခွေငျး
အထကျပါ လက်ခဏာမြား ခံစားတှရှေိ့ရပါက နီးစပျရာ ခုခံကြ ကာလသားရောဂါ တိုကျဖကျြရေးဌာနမြား ဆေးရုံမြားတှငျ သှားရောကျ၍ ရောဂါ ရှိမရှိ ဆီးနမူနာ သို့မဟုတျ လိငျအင်ျဂါမှ ထှကျသော အရညျမြားကို ဓာတျခှဲ စဈဆေးရနျ လိုအပျပါတယျ ။
ဆိုးကြိုးမြားက ဘာတှလေဲ ?
ရောဂါလက်ခဏာမြားမှ ကူးစကျခံရပွီး ရကျသတ်တပတျ သို့မဟုတျ လအနညျးငယျတှငျ အလိုလိုပြောကျကငျးသှားနိုငျပါသညျ ။ သို့သျော ရောဂါပိုးသညျ ခန်ဓညကိုယျထဲတှငျ ရှိနသေေးသညျ့အတှကျ နောကျတဈကွိမျဖွဈပှားနိုငျသလို သူတဈပါးအား ကူးစကျစနေိုငျပါသညျ ။
ရောဂါဆိုးရှားလာပါက အမြိုးသမီးမြားတှငျ သားအိမျပွှနျ ပိတျခွငျး ၊တငျပါးဆုံတှငျး အင်ျဂါမြား ရောငျယမျးလာပွီး နောငျအခြိနျ ကလေးမရနိုငျသညျအထိ ဖွဈပှားနိုငျပါတယျ ။ ကလေးပကျြကခြွငျး လမစဘေဲ့ မှေးဖှားခွငျး မှေးလာမညျ့ကလေးကိုလဲ ကူးစကျ နိုငျသညျ့အတှကျ နီယိုနတေိုရမျ ( Opthalamia Neonatorum ) ဟုချေါသော မှေးရာပါ မကျြစိရောဂါမြား ဖွဈပှားစပေါတယျ ။
အမြိုးသားမြားအနဖွေငျ့ ဆီးလမျးကွောငျးမှ တဆငျ့ ဆီးကွိတျရောငျခွငျး နာခွငျးတို့ကို ဖွဈစနေိုငျပွီး မွုံသညျအထိဖွဈပှားစနေိုငျပါတယျ ။
ပိုးသတျဆေး ပနီဆလငျထိုးခွငျး သောကျဆေးပေးခွငျးဖွငျ့ ကုသနိုငျပါတယျ ။ ဆေးမတညျ့ခွငျးမြား တခွားရှိနသေော ရောဂါမြားအတှကျ ကုထုံးမြား မတူညီပါ ။ ထို့အတှကျ သကျဆိုငျရာ ဆရာဝနျနှငျ့ပွသပွီး သခြောထိရောကျသော ကုသမှု လိုအပျပါတယျ ။ ထို့အပွငျ မိမိ လိငျဆကျဆံဖျောတှငျပါ ရောဂါပိုး ရှိမရှိ စဈဆေးသငျ့ပွီး ရောဂါတှရှေိ့ပါက အတူတကှ ကုသမှုခံယူရနျ လိုအပျပါတယျ ။
ဂနိုရောဂါ ဆိုတာဘာလဲ ?
ဂနိုရောဂါ ဆိုတဲ့ ဆီးပူညောင်းကျရောဂါလို့လဲ ခေါ်ကြပြီး အဓိက လိင်ဆက်ဆံရာမှ ကူးစက်တဲ့ ရောဂါတစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ဂိုနိုကောကပ် ( Gonococcus ) ဘက်တီးရီးယားကူးစက်မှုကြောင့် ဖြစ်ပွားလေ့ရှိပါတယ် ။
အကာအကွယ်မဲ့ လိင်ဆက်ဆံခြင်း ( ကွန်ဒုံမသုံးခြင်း )မှ တဆင့် ကူးစက်နိုင်ပါတယ် ။ ပါးစပ်နဲ့ စအို လမ်းတွေကလဲ ကူးစက်နိုင်ပါတယ် ။ မိခင်မှ ကလေးသို့လဲ ကူးစက်နိုင်ပါတယ် ။
အကာအကွယ်မဲ့လိင်ဆက်ဆံခြင်းဟာ လိင်မှတဆင့်ကူးစက်တတ်သော ရောဂါအကုန်လုံးကို ဖိတ်ခေါ်သကဲ့သို့ဖြစ်စေတဲ့အတွက် လိင်ဆက်ဆံရာမှာ ကွန်ဒုံးသုံးခြင်းဟာ အကောင်းဆုံးသော အကာအကွယ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
ဘယ်လို လက္ခဏာတွေပြမလဲ ?
ဂနိုရောဂါဟာ ကူးစက်ပြီး ဆယ်ရက်ကြာလျှင် ရောဂါလက္ခဏာများပြလေ့ရှိသော်လည်း တချို့သူများတွင် လပေါင်း အတော်ကြာမှ ပြသလေ့ရှိပါတယ် ။
၁၀ ရာခိုင်နှုန်းသော အမျိုးသားများနှင့် ၅၀ရာခိုင်နှုန်းသော အမျိုးသမီးတွေမှာတော့ ဒီရောဂါလက္ခဏာတွေကို မခံစားရပါဘူး ။
* မိန်းမကိုယ်ကနေ အဖြူများဆင်းခြင်း စိမ်းရွှေရွှေ ခပ်ဝါဝါ ပျစ်ချွဲချွဲ အရည်များ ဆင်းခြင်း
* ဆီးသွားစဉ်နာကျင်ခြင်း ဆီးအောင့်ခြင်း
* ဝမ်းဗိုက်အောက်ပိုင်းတစ်ဝိုက်တွင် နာကျင်ခြင်း
* ရာသီလာစဉ် သို့မဟုတ် ရာသီတစ်ခုနှင့်တစ်ခုအကြား သွေးအလွန်အမင်း ဆင်းခြင်း သွေးဆင်းများခြင်း
* အမျိုးသား အင်္ဂါမှ အချွဲဆင်းခြင်း
* ဆီးကျင်ခြင်း ၊ ဆီးအောင့်ခြင်း ၊ ဆီးကျန် ဆီးမဝဟုခံစားရခြင်း
* ဆီးခဏခဏ သွားခြင်း
* လိင်တံထိပ် အရေပြားတွင် နာကျင် ရောင်ယမ်းနေခြင်း
အထက်ပါ လက္ခဏာများ ခံစားတွေ့ရှိရပါက နီးစပ်ရာ ခုခံကျ ကာလသားရောဂါ တိုက်ဖျက်ရေးဌာနများ ဆေးရုံများတွင် သွားရောက်၍ ရောဂါ ရှိမရှိ ဆီးနမူနာ သို့မဟုတ် လိင်အင်္ဂါမှ ထွက်သော အရည်များကို ဓာတ်ခွဲ စစ်ဆေးရန် လိုအပ်ပါတယ် ။
ဆိုးကျိုးများက ဘာတွေလဲ ?
ရောဂါလက္ခဏာများမှ ကူးစက်ခံရပြီး ရက်သတ္တပတ် သို့မဟုတ် လအနည်းငယ်တွင် အလိုလိုပျောက်ကင်းသွားနိုင်ပါသည် ။ သို့သော် ရောဂါပိုးသည် ခန္ဓညကိုယ်ထဲတွင် ရှိနေသေးသည့်အတွက် နောက်တစ်ကြိမ်ဖြစ်ပွားနိုင်သလို သူတစ်ပါးအား ကူးစက်စေနိုင်ပါသည် ။
ရောဂါဆိုးရွားလာပါက အမျိုးသမီးများတွင် သားအိမ်ပြွန် ပိတ်ခြင်း ၊တင်ပါးဆုံတွင်း အင်္ဂါများ ရောင်ယမ်းလာပြီး နောင်အချိန် ကလေးမရနိုင်သည်အထိ ဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ် ။ ကလေးပျက်ကျခြင်း လမစေ့ဘဲ မွေးဖွားခြင်း မွေးလာမည့်ကလေးကိုလဲ ကူးစက် နိုင်သည့်အတွက် နီယိုနေတိုရမ် ( Opthalamia Neonatorum ) ဟုခေါ်သော မွေးရာပါ မျက်စိရောဂါများ ဖြစ်ပွားစေပါတယ် ။
အမျိုးသားများအနေဖြင့် ဆီးလမ်းကြောင်းမှ တဆင့် ဆီးကြိတ်ရောင်ခြင်း နာခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေနိုင်ပြီး မြုံသည်အထိဖြစ်ပွားစေနိုင်ပါတယ် ။
ပိုးသတ်ဆေး ပနီဆလင်ထိုးခြင်း သောက်ဆေးပေးခြင်းဖြင့် ကုသနိုင်ပါတယ် ။ ဆေးမတည့်ခြင်းများ တခြားရှိနေသော ရောဂါများအတွက် ကုထုံးများ မတူညီပါ ။ ထို့အတွက် သက်ဆိုင်ရာ ဆရာဝန်နှင့်ပြသပြီး သေချာထိရောက်သော ကုသမှု လိုအပ်ပါတယ် ။ ထို့အပြင် မိမိ လိင်ဆက်ဆံဖော်တွင်ပါ ရောဂါပိုး ရှိမရှိ စစ်ဆေးသင့်ပြီး ရောဂါတွေ့ရှိပါက အတူတကွ ကုသမှုခံယူရန် လိုအပ်ပါတယ် ။
How can you know your baby has hearing problem?
When can you go to gym after abortion?